के तपाईं मलाई कसरी अमेजन सूचि अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ?
जब एक सफल ड्रप-शिपिङ व्यवसाय चलाउन आउँदछ, हरेक इकमर्स इन्टरप्राइजिएजरले अमेजन सूचीमा अनुकूलन गर्न कसरी थाहा पाउदछ। के को लागि? राम्रो तरिकाले अनुकूलित उत्पाद सूचीबद्ध हुन सम्भवतः सम्भावित खरीददारहरूको व्यापक दर्शकहरू देखाईएको एक मात्र तरिका हो कि त्यहाँ खरीदारी। त्यसैले, यदि तपाइँ खोजी इञ्जिन अनुकूलन (एसईओ) को मूल अवधारणाको बारेमा परिचित हुनुहुन्छ भने, यो एक ई-ब्रेनर हो कि अमेजन अनुकूलनले कीवर्ड अनुसन्धानमा पनि बेल्ट गर्दैछ। कुरा यो हो कि कुनै पनि उत्पाद प्रस्ताव खोज विकल्पहरू मार्फत अमेजनमा फेला पार्न सकिन्छ। र विचार गर्नुहोस् कि सटीक म्याच यहाँ शीर्ष महत्त्वपूर्ण खोजी कारकहरूमध्ये हो, यसको मतलब यो हो कि तपाईको कीवर्ड चयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईले ड्रप-शिपिङ स्टोर चलाउन चाहानुहुन्छ जुन वास्तवमा बेच्नुहुन्छ। र तल म तपाईंलाई देखाउन जाँदैछु कि अमेजन सूचीहरू कसरी उत्तम तरिकामा सम्भव तरिका अनुकूलन गर्न अनुकूलन गर्नुहोस्।
तर हामीले सुरु गर्नु अघि, हामी अमेजन - उत्पाद शीर्षक, बुलेट अंकहरू, र उत्पादनमा तपाईंको उत्पादन सूचीको लागि कवर खोजी खोजी अनुकूलन को मुख्य क्षेत्रहरू यहाँ छन्। विवरण। तथापि, तथापि, कि म Google कीवर्ड प्लानर प्रयोग गरेर तपाईंको खोजशब्द अनुसन्धानसँग किकस्टार्टमा दृढतापूर्वक सिफारिस गर्छु र अरु केही पनि छैन। यो खोजको डिफल्ट उपकरण प्रयोग गरी विश्वको खोजी विशाल द्वारा तपाईले आफ्नो कुञ्जीपाटीहरूको ठूलो फोटो शर्त र खोज श्रोताहरु द्वारा प्रयोग गरिने मुख्य शब्दावलीलाई मात्र बुझ्न सक्नुहुनेछ न केवल अमेजनमा तर सक्रिय खरीददारहरूको बाहिरी अन्य चीजहरु को लागी अन्य उत्पादनहरु (जस्तै, ईबे, अलिबाबा, आदि)। र एकपटक तपाईंले धेरै आधारभूत कुराहरू सिकाउनुभयो, म निम्न विशेष तरिकाले अनुरूप खोजशब्द अनुसन्धान उपकरणहरू मध्ये एक छान्नुहोस्, जस्तै कि Keywordtool Source .io, वैज्ञानिकसेलर, स्कोप, वा AMZ ट्रयाकर।
अमेजन सूची अनुकूलित गर्न को लागी कसरि
तपाईंको लक्ष्य खोजशब्दों को मुख्य सूची को एक पल्ट तैयार गर्न को लागि, यो सही ठाँउ मा राखन शुरू गर्ने समय हो। तल तपाईले देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ अमेजन सूचीहरू अनुकूलन गर्न कसरी आफ्नो तीन मुख्य भागहरू - उत्पादन शीर्षक, बुलेट अंकहरू, साथसाथै उत्पादन विवरण - ताकि तपाईं खोजीको शीर्षमा प्रदर्शित हुने संभावनाहरू हुन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ
चरण एक: उत्पादन शीर्षक
उत्पादन शीर्षक शायद तपाइँको लक्षित खोजशब्दहरू र सम्भव रूपमा लोकप्रिय खोज वाक्यांशहरू समावेश गर्न सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो;
उत्पाद शीर्षकको अधिकतम लम्बाई 200 वर्ण लामो लाग्न आउँदछ;
प्रत्येक अर्को शब्दको पहिलो पत्रको पूंजीकृत हुनुपर्छ।
अंकहरू केवल "सागरको सट्टामा" आठ "(8") लाई मात्र अनुमति दिइनेछ;
उत्पाद शीर्षक / आकार उत्पादन शीर्षकमा सामेल हुनुहुँदैन, जबसम्म तिनीहरू वास्तवमा प्रासंगिक विवरणहरू छैनन्।
चरण दुई: बुलेट अंक
बुलेट अंकहरूको सूची भनेको उत्पादनको मुख्य विशेषताहरू र फाइदाहरू वर्णन गर्नु हो। एक स्वच्छ र स्पष्ट तरिकाले मात्र;
उत्पादनको बारेमा मात्र महत्त्वपूर्ण जानकारी, साथै मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरू राख्नु पर्छ;
बक्समा आउन चाहने डेटाको प्रत्येक टुक्राको आवरण गर्न सिफारिस गरिन्छ।
चरण तीन: उत्पादन विवरण
वास्तवमा यो बुलेट अंकहरूको सूचीको एक विस्तृत संस्करण हो;
उत्पादन विवरण ग्राहकको मुख्य दुखाइ बिन्दुहरू सम्बोधन गर्न अपेक्षा गरिएको छ;
यो अत्याधुनिक कीवर्डको साथ हुनु पर्छ, साथै कीवर्ड अनुकूलित गर्न;
केवल अनूठा डेटा को सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताहरु र लाभहरुलाई अनुमति दिइन्छ।